Kazan - muzi omkhulu, ukusakaza ngokukhululekile phezu loMfula iVolga. elinabantu abantu abangaphezu kwesigidi. Futhi kuleli dolobha elikhulu ithole indawo yawo yokuhlala eziyinkimbinkimbi "Runway." LCD etholakala endaweni izindiza komuzi. Yiqiniso, awukho phakathi nendawo, kodwa eduze ngokwanele kulo.
Aircraft isakhiwo ndawo yabizwa ngokuthi indawo, lapho "Runway" (LCD). Umthuthukisi yakha kule ngxenye yedolobha ukuze izakhamuzi zalo esizayo wayengazi lutho kudingeka futhi likwazi ukuhlukaniseka kalula uwufinyelele.
Ngaphezu kwalokho, endaweni ukwakhiwa izindiza kuyinto isikhungo yezimboni Kazan. Yena ayilokothi iyeke nokuguquguquka kuze kube yilolu suku. Iningi izinkampani ithatha umkhakha zezindiza, okuyinto kuyabonakala ngisho igama kule ndawo. Kukhona ngisho imboni indiza.
Godovikova Street, okuyinto lakhiwa yokuhlala eziyinkimbinkimbi indawo "evulekile" itholakala eduze ezinkulu sezimoto Umthambo - Leningrad ezitaladini. Ukuze afinyelele eziyinkimbinkimbi, ungase futhi by Aidarova ezitaladini, ukuvula mgwaqo Lukin.
LCD "Runway" (Kazan) emva ukwakhiwa kuyoba izindlu ezimbili, ngamunye ephethe eziyishumi phansi. Zokuhlala ekhaya Umakhi yakhelwe zokungena eziyisishiyagalombili ngamunye. Zonke izakhiwo zakhelwe Uhlaka ezinikwe ubuchwepheshe usebenzisa yakamuva ukwakhiwa ubuchwepheshe.
I mbumbulu zezakhiwo abazenzi ubuchwepheshe kwesihenqo odongeni nge-gap emoyeni. bona babhekene nenselele slabs egwadle sobumba. Sobabili udala hhayi kuphela ithuba pholisa olungaphambili lwesonto, kodwa futhi eyigeza. Ngaphezu kwalokho, unjiniyela sisetshenziswa itheyiphu glazing we balcony. Lokhu uyonikeza Airy uzizwe kulo lonke ukubukeka yezakhiwo eziyinkimbinkimbi.
Njengoba unjalo "Runway" LCD emzini, inikeza izakhamuzi zakhona ikusasa cishe yonke ingqalasizinda. Njengoba sekushiwo, endaweni Aircraft ingenye amaningi futhi uyaqhubeka ukuthuthukisa ngamandla edolobheni. Ngakho-ke, ukuntuleka izakhamuzi zalo asibi ezisezikhungweni kwengqalasizinda. Effect kanye ukusondela ukuba "Izindiza" metro station.
Labo ukuhambisa nezingane zabo nokuthi bayinikela kubani "Runway" LCD iba ekhaya, ingakwazi ukusebenza ezikoleni eziseduze. Kunezinhlobo eziningana kule ndawo, singakwazi kuphela ukukhetha. Ngaphambi ngamunye wabo engafinyelelwa ngezinyawo. I Kungashiwo okufanayo mayelana izinkulisa.
Ngaphezu kwalokho, endaweni has umtholampilo izingane kanye nabantu abadala, ezihlukahlukene izitolo kuwo wonke amazinga kanye osayizi: kusukela Hypermarkets format "ekhaya". Kukhona futhi izikhungo yasebhange, futhi amagalaji. Umthuthukisi wakhetha indawo ekwakheni isakhiwo afakwa nge simo kubalimi zakusasa ukuba balwe kunoma yiziphi ukungakhululeki futhi awazange esihlukanisiwe indlela yabo yokuphila evamile.
Futhi unjiniyela abanakekela mayelana abashayeli, ahlomele kubo ayisithupha namashumi amahlanu kanye zokupaka, okuyinto idlula ngisho inani zokuhlala phakathi eziyinkimbinkimbi. Futhi ifakwe ebaleni lokudlala.
Ukuhlela zokuhlala, izindleko
eziyinkimbinkimbi Ubude kuhlanganisa zokuhlala anamakhulu mahlanu anamanci mathandathu anamihlanu Izakhiwo obuhlukahlukene kanye nenombolo ezehlukene square metres. I aphansi kuyoba ekamelweni elilodwa ngoba amane nanhlanu square metres. I enkulu - lokulala. Ziyofinyelela ayisishiyagalolunye square metres.
Zonke amafulethi anikeza anolaka sekugcineni Umakhi eyenza zabanikazi esizayo ukuqaphela zonke amaphupho abo mayelana izindlu ukulungisa yabo esikhathini esizayo.
Izindleko ezindlini okuyinkimbinkimbi yokuhlala iqala kusukela ngamashumi amahlanu anamathathu amawaka ngamunye imitha square. Lokho, umuntu endlini enamakamelo izobiza umnikazi walo ruble ayizigidi ezingu kancane engaphezu kwemibili. Kodwa lokhu akulona kabuhlungu ezindlini anikezwa yokuhlala eziyinkimbinkimbi "Runway." Izibuyekezo nezinye izakhiwo uthi lapha - isigaba izindlu umnotho.
Noma yimuphi umndeni uzothola okuthile kule yokuhlala eziyinkimbinkimbi inketho efanelekayo ukunambitheka yakho futhi isabelomali. I kakhulu indawo eziyinkimbinkimbi, okungukuthi ukwakhiwa ezimbili babhekane, kuholela ensimini eziyinkimbinkimbi ivaliwe kusukela endleleni kanye nezimoto. Abazali bangaqiniseka kalula izingane zidlala lokudlala.
Kufanele uthenga ingcebo manje eCrimea ngo mortgage?
Ngazi kanjani efulethini ezizimele noma cha? Izindlela eziyinhloko
LCD "esigodlweni": incazelo, ukubuyekezwa
Yiziphi BMPs? ukuqeqeshwa okuyisisekelo: incazelo, izici kanye nokubuyekeza